အကယျလို့သာအာဆငျနယျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲက ပှဲထှကျစာရငျးမှာ ဗနျဒီဘိချ သာပါခဲ့ရငျ… – Premier League Special
November 2, 2020 yeminn News 0
ပှဲထှကျစာရငျးကလညျး ကာဗာနီမပါ ဗနျဒီဘိချမပါနဲ့.. ဘာလဲ? သူတို့ကို အရနျခုံမှာထိုငျဖို့ ချေါထားတာလား? ဆိုလျရှားရဲ့ အလယျတနျး ရှေးကှကျက တှနျမီနေးလျ-ဖရကျဒျ- ပေါ့ဂျဘာတဲ့။ ရှမှေ့ာ ခြာတိတျအတှဲ ရကျရျှဖို့ဒျနဲ့ ဂရငျးဝုဒျ ဆိုတော့ ကောငျတာတဈပေါကျ ကစားမယျ့အထာပဲ။ ဒါပမေဲ့ ငါတို့လိုနတော ပွိုငျဘကျနောကျတနျးကို လဲပွိုစမေယျ့ အဓိက တိုကျစဈမှူး။ ခကျခဲမယျ့ပှဲပါ ဂိုဂိုးမနျယူ!…ဒါဟာ အာဆငျနယျနဲ့မကစားမီ ပှဲထှကျလူစာရငျးကို Facebook ပျေါတငျလိုကျခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတဈဦးရေးသားခဲ့တဲ့ စာပဲဖွဈပါတယျ။
သူရေးထားသလိုပါပဲ မနျယူကိုရောကျရှိလာပွီးနောကျပိုငျးကတညျး ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့မရခဲ့ဘဲ ပရိသတျတှနေဲ့ နညျးပွဆိုးလျရှားအကွား အမွဲစကားလုံးတိုကျပှဲတှဖွေဈနတေဲ့ ဗနျဒီဘိချကလညျး ဒီတဈခေါကျမှာတော့ အာဆငျနယျနဲ့ကစားမယျ့ ပှဲမတိုငျခငျမှာ သူကိုယျတိုငျ ဖှငျ့ဟပွောကွားလာပါတယျ။
အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျရှိတဲ့ ဗနျဒီဘိချဟာ ပေါငျသနျး ၄၀ နီးပါးနဲ့ မနျယူကိုပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ တာဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ပှဲစဉျဖွဈတဲ့ ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲမှာ တဈဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့မရဘဲ အရနျခုံမှာသာ အခြိနျကုနျနရေတာမြားပါတယျ။
ဗနျဒီဘိချက “ဘောလုံးသမားတှဆေိုတာ အမွဲပဲပှဲတှကေစားခငျြနတောပါ။ လကေ့ငျြ့ ခနျးဆငျးနရေတာလညျး ကောငျးပမေယျ့ ဘယျသူမဆို ပှဲကစားရတာ ပိုကောငျးပါ တယျ။ ပှဲကစားခငျြလို့ပဲ ကြှနျတျောတို့ ဘောလုံးကစားနကွေတာမလား။ ပှဲစဉျ တျောတျောမြားမြားကို ပိုကောငျးအောငျကစားနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျော ယုံကွညျပါ တယျ” လို့ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ဗနျဒီဘိချဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ခနျြပီယံလိဂျ လိုကျဇဈနဲ့ပှဲ စဉျမှာ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့လညျး ပှဲခြိနျ ၆၈ မိနဈမှာ ဘရူနိုဖာနနျဒကျနဲ့ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယျ။ ဗနျဒီဘိချကိုချေါယူခဲ့တာနဲ့ပတျသကျပွီး မနျယူဂန်ထဝငျ ကစားသမားတှအေကွားမှာလညျး အမွငျတှကှေဲလှဲနကွေသလို အခြို့ပရိသတျ တှကေလညျး ကှငျးလယျကစားသမားမလိုဘူးလို့ ယူဆနတောတှရှေိပါတယျ။
ဗနျဒီဘိချရဲ့ပွဿနာနဲ့ပတျသကျပွီး လီဗာပူးအသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျးဖွဈတဲ့ ဂမြေီရကျနပျကလညျး မလိုအပျတဲ့ချေါယူမှုအဖွဈထငျမွငျနပွေီး ဗနျဒီဘိချအစား နောကျခံလူကောငျးတဈဦးကို ချေါယူသငျ့တယျလို့ ထောကျပွခဲ့ပါတယျ။ ဗနျဒီဘိချ ဟာ ဆိုးလျရှားရဲ့လကျအောကျမှာ ဒီရာသီအတှကျ ၂ ပှဲသာ ပှဲထှကျပါဝငျကစား ခှငျ့ရရှိပါသေးတယျ။
မနျယူနညျးပွဆိုးလျရှားဟာ အသငျးကှငျးလယျမှာ ပေါ့ဂျဘာ၊ ဖရကျဒျ၊ တှနျမီနေး၊ မာတာ၊ ဖာနနျဒကျဈ၊ ဗနျဒီဘိချ၊ မာတဈစတဲ့ ကှငျးလယျကစားသမား ၇ ဦးအထိရှိနတေဲ့အတှကျ ပိုလြှံနတေဲ့ပုံစံရှိနပွေီး အသငျး မှာ အသုံးမပွုတာကွာပွီဖွဈတဲ့ လငျဂတျလညျးပါမယျဆိုရငျ ၈ ဦးအထိ ရှိနမှော ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဂရငျးဝုဒျနဲ့ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈတို့ကလညျး အလယျတနျး တောငျပံတိုကျစဈကစားတဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ မနျယူမှာ အလယျတနျးကစား သမားတှေ အတျောလေးမြားပွားနပေါတယျ။
တနင်ျဂနှနေညေ့က အာဆငျနယျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာလညျး ပှဲထှကျကစားခှငျ့မရခဲ့ဘဲ ၇၅ မိနဈမှသာ ဖာနနျဒကျဈနဲ့ လူစားလဲကစားခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ သူဝငျရောကျကစားခဲ့ခြိနျမှာ မနျယူဟာ (၁-ဝ)နဲ့ ရှုံးနိမျ့နပွေီး အာဆငျနယျအသငျးကလညျး ခံစဈပိတျဆော့နတေဲ့အခွအေနဖွေဈနပေါတယျ။
သူကစားခှငျ့ရတဲ့ ၁၅မိနဈအခြိနျမှာလညျး သူဟာ ဂိုးရနိုငျမယျ့အခှငျ့အရေးတှကေို ကွိုးစားရှာဖှခေဲ့ပမေယျ့ အာဆငျနယျအသငျးက တဈသငျးလုံး ခံစဈမှာ ဝနျးရံပိတျဆို့နခေဲ့တာကွောငျ့ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျလညျး ၁၄နှဈတာကာလလုံး အိုးထရကျဖိုဒျမှာ အာဆငျနယျမနိုငျခဲ့တဲ့ စံခြိနျတဈခုလညျးကြိုးပကျြခဲ့ရပွီး ဒီရာသီမှာ နောကျထပျအိမျကှငျးရှုံးပှဲ ထပျမံရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
အကယ်လို့သာအာဆင်နယ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲက ပွဲထွက်စာရင်းမှာ ဗန်ဒီဘိခ် သာပါခဲ့ရင်..
ပွဲထွက်စာရင်းကလည်း ကာဗာနီမပါ ဗန်ဒီဘိခ်မပါနဲ့.. ဘာလဲ? သူတို့ကို အရန်ခုံမှာထိုင်ဖို့ ခေါ်ထားတာလား? ဆိုလ်ရှားရဲ့ အလယ်တန်း ရွေးကွက်က တွန်မီနေးလ်-ဖရက်ဒ်- ပေါ့ဂ်ဘာတဲ့။ ရှေ့မှာ ချာတိတ်အတွဲ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ ဂရင်းဝုဒ် ဆိုတော့ ကောင်တာတစ်ပေါက် ကစားမယ့်အထာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့လိုနေတာ ပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကို လဲပြိုစေမယ့် အဓိက တိုက်စစ်မှူး။ ခက်ခဲမယ့်ပွဲပါ ဂိုဂိုးမန်ယူ!…ဒါဟာ အာဆင်နယ်နဲ့မကစားမီ ပွဲထွက်လူစာရင်းကို Facebook ပေါ်တင်လိုက်ချိန်မှာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တစ်ဦးရေးသားခဲ့တဲ့ စာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူရေးထားသလိုပါပဲ မန်ယူကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းကတည်း ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရခဲ့ဘဲ ပရိသတ်တွေနဲ့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားအကြား အမြဲစကားလုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ကလည်း ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အာဆင်နယ်နဲ့ကစားမယ့် ပွဲမတိုင်ခင်မှာ သူကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟပြောကြားလာပါတယ်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ပေါင်သန်း ၄၀ နီးပါးနဲ့ မန်ယူကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲမှာ တစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရဘဲ အရန်ခုံမှာသာ အချိန်ကုန်နေရတာများပါတယ်။
ဗန်ဒီဘိခ်က “ဘောလုံးသမားတွေဆိုတာ အမြဲပဲပွဲတွေကစားချင်နေတာပါ။ လေ့ကျင့် ခန်းဆင်းနေရတာလည်း ကောင်းပေမယ့် ဘယ်သူမဆို ပွဲကစားရတာ ပိုကောင်းပါ တယ်။ ပွဲကစားချင်လို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးကစားနေကြတာမလား။ ပွဲစဉ် တော်တော်များများကို ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါ တယ်” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ် လိုက်ဇစ်နဲ့ပွဲ စဉ်မှာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ပွဲချိန် ၆၈ မိနစ်မှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ်ကိုခေါ်ယူခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မန်ယူဂန္ထဝင် ကစားသမားတွေအကြားမှာလည်း အမြင်တွေကွဲလွဲနေကြသလို အချို့ပရိသတ် တွေကလည်း ကွင်းလယ်ကစားသမားမလိုဘူးလို့ ယူဆနေတာတွေရှိပါတယ်။
ဗန်ဒီဘိခ်ရဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လီဗာပူးအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဂျေမီရက်နပ်ကလည်း မလိုအပ်တဲ့ခေါ်ယူမှုအဖြစ်ထင်မြင်နေပြီး ဗန်ဒီဘိခ်အစား နောက်ခံလူကောင်းတစ်ဦးကို ခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဗန်ဒီဘိခ် ဟာ ဆိုးလ်ရှားရဲ့လက်အောက်မှာ ဒီရာသီအတွက် ၂ ပွဲသာ ပွဲထွက်ပါဝင်ကစား ခွင့်ရရှိပါသေးတယ်။
မန်ယူနည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ အသင်းကွင်းလယ်မှာ ပေါ့ဂ်ဘာ၊ ဖရက်ဒ်၊ တွန်မီနေး၊ မာတာ၊ ဖာနန်ဒက်စ်၊ ဗန်ဒီဘိခ်၊ မာတစ်စတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ၇ ဦးအထိရှိနေတဲ့အတွက် ပိုလျှံနေတဲ့ပုံစံရှိနေပြီး အသင်း မှာ အသုံးမပြုတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ လင်ဂတ်လည်းပါမယ်ဆိုရင် ၈ ဦးအထိ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂရင်းဝုဒ်နဲ့ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်တို့ကလည်း အလယ်တန်း တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် မန်ယူမှာ အလယ်တန်းကစား သမားတွေ အတော်လေးများပြားနေပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ညက အာဆင်နယ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း ပွဲထွက်ကစားခွင့်မရခဲ့ဘဲ ၇၅ မိနစ်မှသာ ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ လူစားလဲကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူဝင်ရောက်ကစားခဲ့ချိန်မှာ မန်ယူဟာ (၁-၀)နဲ့ ရှုံးနိမ့်နေပြီး အာဆင်နယ်အသင်းကလည်း ခံစစ်ပိတ်ဆော့နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ သူကစားခွင့်ရတဲ့ ၁၅မိနစ်အချိန်မှာလည်း သူဟာ ဂိုးရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေကို ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် အာဆင်နယ်အသင်းက တစ်သင်းလုံး ခံစစ်မှာ ဝန်းရံပိတ်ဆို့နေခဲ့တာကြောင့် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်လည်း ၁၄နှစ်တာကာလလုံး အိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ အာဆင်နယ်မနိုင်ခဲ့တဲ့ စံချိန်တစ်ခုလည်းကျိုးပျက်ခဲ့ရပြီး ဒီရာသီမှာ နောက်ထပ်အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲ ထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အမှားအတှကျ တာဝနျယူတောငျးပနျလိုကျတဲ့ ပေါ့ဂျဘာ